ढिडो र गुन्द्रुक : गाँउमा हेला, शहरमा सौख ! - सिम्रिक खबर
नेपाली समुदायमा गाँउमा हेलाकोे शिकार बनेको तर शहरमा ब्रान्ड बनिरहेको ढिडोको स्वाद कतिलाई थाहा छ ? हाम्रो बुवाआमाको समय उहाँहरुले अधिकांश छाक ढिडो, गुन्द्रुकमै केन्द्रित रह्यो । तर विस्तारै गाँउघरमा ढिडो खाने क्रम बढेको छ । तर शहर तिर यसको महत्व दिनानु दिन बढीरहेकै छ । तिख्खर स्वादको गुन्द्रुक, नरम ढिडो र टिमुर गोलभेडाको अचार । अथवा तपाईं यसमा लोकल कुकुराको झोल पनि समावेश गर्न सक्नुहुन्छ । थोरै साग । त्यसमाथि दही भए त गजब ! यो हो रैथाने परिकार, ढिडो र गुन्द्रुक । लेकाली भेगको मुख्य खान्की, शहरका सौखका । कतिपय लेकाली भेगमा अझैपनि ढिडो र गुन्द्रुक खाइन्छ । पिरो, अमिलो गुन्द्रुकसँग ढिडोले बिहान-साँझको छाक टारिन्छ । गाउँघरतिर यसलाई ‘अडिलो खाना’ भनिन्छ । अर्थात एक छाक भरपेट खाएपछि दिनभरलाई पुग्ने ।
शहरमा सौखको खान्की – शहरमा चाहि ढिडो सौखिनहरुले खाने खान्की हो । कुनै दिन स्वाद फेर्नुपरेमा धेरैले आफ्नो भान्सामा ढिडो मस्काउन थाल्छन् । ढिडोको लागि कोदोको पिठो भए हुन्छ, मकैको पिठो भए हुन्छ, फापरको पिठो भए हुन्छ । अर्थात विकल्प धेरै छन् । पकाउन उत्तिकै सजिलो । सजिलो मात्र कहाँ हो र ? स्वादिलो पनि । त्यही कारण त शहरका नामी रेष्टुरेन्टको मेनुमा उपलब्ध छ, ढिडो र गुन्द्रुक । कतिपय त यस्ता रेष्टुरेन्ट छ, जसले मूख्य खान्कीको रुपमा ढिडो र गुन्द्रुक नै पस्कने गरेको छ । शहर एवं राजमार्गका होटलररेष्टुरेन्टको विकाउ परिकार हो यो । रुचीकर परिकार हो । शहरमा ढिलो र गुन्द्रकमा मिसिएको छ, लोकल कुखुराको झोल । पीरो, अमिलो, नुनिलो चट्ट मिलेको झोलसँग नरम ढिडो डल्ला बनाउँदै निल्नुको स्वाद कम्ता हुन्छ ?
सीमापारी ढिडो र गुन्द्रुक – ढिडो र गुन्द्रुक शहरको छुटै ब्रान्ड हो । त्यसो त यो परिकार नेपाली समुदायले सात समुन्द्रपारी पनि पु¥याएका छन् । विदेशका नेपाली रेष्टुरेन्टहरुले समेत सगर्व ढिडो र गुन्द्रुक पस्किरहेका छन् । जहाँ(जहाँ नेपाली छन्, त्यहाँको चुल्होमा ढिडो र गुन्द्रुक त पाकेकै छ । अझ भनौं, ढिलो र गुन्द्रुकमा नेपालीले आफ्नोपनको स्वाद पाउँछन् । आफ्नो माटोको मिठास पाउँछन् ।
अब कुरा, गुन्द्रुकको – गुन्दु्रक पनि हाम्रो आफ्नै रैथाने परिकार हो । रायो वा तोरीको सागलाई ओइलाएर विशेष किसिमले गलाएपछि त्यो अमिलो हुन्छ । यसलाई घाममा सुकाएर भण्डारण गरिन्छ । जति(जति बेला तरकारी अभाव हुन्छ, गुन्द्रुकको झोल पकाइन्छ । अर्थात दुःखको छाक टार्ने खान्की पनि हो, गुन्द्रुक । ढिडो र गुन्द्रुक आपसमा मिल्ने परिकार हुन् । त्यसलाई गोलभेडा र टिमुरको अचारले थप तिख्खर बनाउँछ ।
कति स्वस्थ्यवर्द्धक ? – ढिडो र गुन्द्रुकमा हामी आफ्नो स्वाद भेट्छौ । किनभने यो हाम्रा पूर्खाहरुले तयार गरेको थाली हो । अतः यो थाली कति सन्तुलित एवं पौष्टिक छ त ? ढिडो र गुन्द्रुक कति स्वस्थ्यवर्द्धक खान्की हो ? पहिलो कुरा त, मकै, कोदो, फापर आदि हाम्रै खेतबारीमा उत्पादन हुने अन्न हुन् । यसकारण यो सर्वसुलभ छ, हाम्रो निम्तिी । अक्सर आफ्नै बालीनालीमा उत्पादन हुने भएकाले विषादीको प्रयोग हुँदैन । अर्थात जैविक उत्पादन भए । मकै, कोदो, फापरमा पोषकतत्व पनि पर्याप्त हुन्छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, युरिक एसिड जस्ता समस्याबाट मुक्त रहनका लागि पनि यस्तो खान्की निकै उपयोगी हुने बताइन्छ । यसैगरी गुन्द्रुकमा ४८ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, ४९ प्रतिशत प्रोटिन र ३ प्रतिशत चिल्लो पदार्थ हुने बताइन्छ ।